Deg deg:warbxin hada soodhacday oo lagu xaqiray shacabka Gobolka Ogaadeeniya lagu xasuuqayo. | ogaden24
Deg deg:warbxin hada soodhacday oo lagu xaqiray shacabka Gobolka Ogaadeeniya lagu xasuuqayo.
Warbixin ay soo saartay hay’adda xuquuqul insaanka dalka Ethiopia ayaa sheegaysa in dagaalada qowmiyadeed ee ka jira xuduudaha Oromia iyo Soomaalida dalka Ethiopia lagu dilay shacab Soomaaliyeed oo gaaraya 451 qof, laguna dhaawacay 251 qof oo si daran loo jirdilay.
Sidoo hay’addu ku sheegtay warbixinteeda in weeraradan ay ka qeybgaleen ciidamada booliska Oromia oo laga hayo kiisas ka badan sagaal (9) gabdhood oo ay kufaadeen Oromada, waxaa kaloo lagu xusay warbixinta hay’adda in illaa 30 ruux oo Soomaali lagu la’yahay rabshadaha ka socda.xuduuda labada qowmiyadood kuwaasoo aan noollal iyo geerin midna lagu hayn.
Dhinaca kale warbixinta ayaa aheegtay in ciidamada Liyou Police ay ayaguna weeraro ka.geysteen magaalooyinka ku dhow xuduudaha kuna dilleen 196 qof oo Oromo ah, isla markaana dhaawaceen 88 ruux oo ay ku jiraan saraakiil Police oo ka tirsan gobolka Oromia.
Ayada oo warbixintaan ay ka soo baxayso xafiiska hay’adda xuquuqul insaanka ee dalka Ethiopia ayay hadana indhaha iska tirtay wax ka qabashadeeda dowladda uu hogaamiye Aby Ahmed, oo ku mashquulsan inuu fowdo ku sii jiro dhulka Soomaalida si ay u gaaraan danaha qowmiyadda haysa talada talada dalkaas.
WARAR DHEERAADA HOOS KA DAAWO